यी हुन् जापानी भाषा सिक्ने पाँच प्रभावकारी सूत्र – जीवन शैली
Home /टिप्स एण्ड ट्रिक्स/यी हुन् जापानी भाषा सिक्ने पाँच प्रभावकारी सूत्र
जापानको आकर्षण बढेको छ। अहिले जापानले कर्मचारी माग गरेपछि त्यसतर्फ धेरैको ध्यान खिचिएको छ। त्यसो त यसअघि पनि नेपालीहरू विद्यार्थी भिसामा जाने गरेका थिए। जापान जानलाई एउटा समस्या भने छ। त्यो हो भाषा। भाषा नसकी जापान जान पाइँदैन। अहिले जापानी भाषा सिकाउने धेरै कन्सल्ट्यान्सीहरू पनि खुलेका छन्।
तर, पनि धेरै सिकारूलाई आधार मान्ने हो भने जापानी भाषालाई विश्वको एक कठिन भाषाको रूपमा लिइन्छ। हुन त अरूको भाषा सिक्नलाई यसै पनि गाह्रो नै हुन्छ। तर आज हामी तपाईंहरूलाई जापानी भाषा सिक्ने सजिला उपायहरूबारे बताउँदै छौँ। जुन टिप्स जापानी भाषा सिक्ने सुरु गरेकालाई उपयुक्त हुनेछन्।
१. आवश्यकताभन्दा बढी नपढ्ने जति
यदि तपाईंले जापानी भाषा सिक्न शुरु गरिसक्नु भएको छ, हिरागाना र काताकाना र केही खान्जीहरु पनि आउँछ भने जापानी पढाइका लागि तपाइ योग्य हुनुहुन्छ । अब थोरै थोरै जापानीबाट पढाइ शुरु गर्न सकिन्छ । सबै पाठ्यक्रम संकलन गरेर पढ्न शुरु गर्ने र केही पछि अलि कठिन जापानी लेख रचना पढ्न शुरु गर्न सकिन्छ ।
जापानी लेखहरू पढ्दा शुरुशुरुमा केही बुझ्न सकिँदैन । त्यसका लागि लेखको मुख्य अर्थ बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जति सक्दो जापानीमा लेखिएका विषयहरू पढियो भने पनि भाषा बुझ्न सजिलो हुन्छ । भाषा पढ्न थालेको केही समयपछि जापानी साहित्य पढ्न सकिन्छ । यसो गर्दा केही कठिन त हुन्छ तर यसले मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ । शुरु शुरुमा लोक कथाहरूबाट शुरु गर्न सकिन्छ । किनकि लोक कथाहरू रमाइला र इन्ट्रेस्टिङ हुन्छन्।
२. जापानी गीत सुन्ने
जापानी भाषा सिक्न जापानी गीत सुन्दा पनि सहयोगी हुन्छ । रेकर्ड गरिएका गीत बारम्बार सुन्दा पनि यसले भाषा बुझ्न सहयोग गर्छ । त्यस्तै जापानी एनिमेशनहरूमा तल सब टाइटल पनि दिइने हुँदा यसले अर्थ बुझ्न थप मद्दत गर्छ । जबसम्म पूरै बुझिँदैन लगातार सुनिरहनु पर्छ । जापानी भाषाको समाचार, सिरियल हेर्ने र सुन्ने गर्नाले पनि भाषामा सुधार आउन सक्छ । शुरु शुरुमा सबटाइटल भएका जापानी कार्यक्रम हेर्दा सहयोगी त हुन्छ तर यसले आफ्नो दिमाग चलाउनुभन्दा पनि सबटाइटलमा बढी निर्भर बनाउन सक्छ । तर पनि लगातार एउटै कुरा हेरिरँदा त्यसमा प्रयोग भएको शब्द र अर्थ बुझ्न चाहिँ सकिन्छ ।
विदेशी भाषा सिक्नका लागि सबैभन्दा सही समय भनेको सुत्ने बेला भनेर केही वैज्ञानिकहरूले भनेका पनि छन् । सुत्ने बेलामा जापानी गीत सुन्न सकिन्छ । भाषा बुझ्न सकिँदैन तर दिमागले त्यसमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई भने याद गर्छ । भाषा सिक्ने अर्को उपाय भनेको जापानी कार्यक्रम हेर्ने पनि हो ।
हेर्ने र सुन्ने कामले मात्रै कुनै पनि भाषा सिकिँदैन । यसका लागि अभ्यासको पनि आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले जतिसक्दो धेरै जापानी भाषा बोल्नुपर्छ । यसका लागि जापानीहरूलाई साथी बनाउने। जापानीहरू धेरै छिमेकी भएको ठाउँतिर घर रोज्ने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । जापानी संस्कृतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा भाग लिने । यो समयमा बढीभन्दा बढी जापानीहरूसँग भेट्न र साथी बनाउन सकिन्छ ।
४. जापानी भाषाको जर्नल
जापानी भाषामा दैनिकी वा लेख रचना लेख्ने अभ्यास गर्दा पनि भाषा सिक्न सहयोग मिल्छ । स्वतन्त्र भएर आफूलाई जे आउँछ त्यो लेख्न सकिन्छ । दैनिक यस्तो अभ्यास गर्दा भाषामा सुधार आउँछ । आफ्नो दिमागमा जे जे आउँछ त्यो सबै लेख्न सकिन्छ । तर यो अभ्यास दैनिक गर्न भने आवश्यक छ । दैनिक एक पाना यस्तो लेख लेख्नाले तपाईंको मनोबल पनि बढाउँछ र नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने तपाईंको चाहनालाई पनि बढाइदिन्छ ।
५. काराओके वा जापानी गीतहरू गाउने
कोही कोहीलाई गीत गाउने यस्तो योजना त्यति राम्रो नलाग्न सक्छ । अरू मानिसको अगाडि गीत गाउने योजना खासै राम्रो नलाग्न सक्छ । जापानमा भने यस्तो गर्न धेरै सजिलो छ । सबैभन्दा सजिलो काराओके बूथमा जाने ढोका बन्द गर्ने र गीत गाउने अभ्यास गर्ने । युट्युब वा अन्य जहाँ कहिँ जुनसुकै गीत सुनेको भए पनि त्यो गाएर अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
नवराजको नयाँ वर्षको उपहार ‘मोटरसाइकल आजै किनेको’
TAGS: जापानी भाषा